Adikao amin'ny fomba tsotra ny lohahevitra sy ny plugins WordPress. Famoronana an-tserasera
Adikao amin'ny fomba tsotra ny lohahevitra sy plugins amin'ny WordPress
Ny fandikana lohahevitra sy plugins dia mety hiteraka fahasarotana tsy ilaina, indrindra raha manandrana manao azy amin'ny fanovana ny kaody tanana isika. Na izany aza, misy safidy hafa tiako zaraina aminao anio ary mety hahasoa tokoa satria tsotra io raha oharina amin'ny safidy hafa ary afaka manampy mitsitsia fotoana sarobidy amin'ny asantsika.
Voalohany indrindra, mila mandray an-tsaina isika fa tsy ny lohahevitra WordPress rehetra dia azo adika, indrindra raha efa antitra izy ireo. Raha hadika ny lohahevitra iray, dia tsy maintsy ho »vonona ny fandikan-teny»Ary ny mpanoratra ny modely dia nanomana azy mba hahafahana mora adika amin'ny fiteny rehetra nefa tsy mila manova ny kaody. Na dia afaka manao fandikan-teny amin'ny tanana aza isika, marina fa izany dia afaka manome aretin'andoha bebe kokoa noho izay ilaintsika, noho izany dia hifantoka amin'ny programa iray natao hifanaraka amin'ity asa ity isika anio.
Antsoina ny programa poedit Ary raha mbola tsy nanararaotra nampiasa azy ianao dia holazaiko aminao fa rindrambaiko maimaim-poana izany ka azo ampiasaina maimaim-poana ary koa amin'ny sehatra rehetra. Mba hampidinana azy dia tsy hiditra amin'ny pejy ofisialiny fotsiny ianao ity rohy ity. Raha vantany vao nisintona azy ianao, ny sisa ataonao dia ny mihazakazaka ilay rakitra apetraka ary apetrakao. Raha vantany vao nahavita an'io ianao dia ny manao raharaham-barotra fotsiny. Tokony ho fantatrao fa manana safidy telo hafa ianao handikana tsara ny lohahevitra na ny plugin-nao.
1 Adikao ireo lohahevitra amin'ny famoronana katalaogy vaovao
2 Ampiasao ny rakitra amin'ny fiteny izay entin'ny lohahevitray
3 Miasa amin'ny fisie POT
4 Ary ny plugins?
Adikao ireo lohahevitra amin'ny famoronana katalaogy vaovao
Ny Poedit dia miasa amin'ny katalaogy izay ahafahantsika mandika ireo teny heverinay fa mety.
Amin'ity safidy voalohany ity dia ho ampy ho antsika ny fanatanterahana ny programa ary alehantsika Archive ao amin'ny menio ambony ary avy eo safidio ny safidy «Katalaogy vaovao".
Vantany vao nahavita an'io isika, dia hamboarinay ny katalaoginay amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ireo safidy avy amin'ny menio katalaogy ary ny fametrahana Propiedades. Eto isika dia afaka manova toetra maromaro, na dia ampy ho antsika aza ny misafidy ny fiteny fandikana antsika amin'ny teny Espaniôla ary mahazo antoka fa miasa amin'ny encoding UTF-8 izahay.
Tsindrio ny Accept ary avy eo dia hamonjy ny katalaoginay amin'ny menio izahay Atao rakitra, tahireto ... ary homentsika ny toerana misy azy ao anatin'ny lohahevitray (mazàna ao anatin'ny lahatahiry lang na fiteny) sy anarana manaraka ny endrika Fiteny_PAIS (ohatra es_ES).
Ny dingana manaraka dia ny fahazoana ireo andinin-tsoratra momba ny lohahevitra hizarantsika amin'ny fandikana azy. Hanao izany amin'ny fisafidianana ny safidy isika Fanavaozana avy amin'ny loharanom-baovao hita ao anaty menio katalaogy. Rehefa vitantsika izany dia afaka miasa miaraka amin'ireo teny azo adika isika ary manomboka miasa. Hisafidy ny teny tsirairay isika ary amin'ny faritra ambany dia hisy varavarankely kely antsoina hoe Fandikana, izay tsy maintsy ampidirintsika amin'ilay fiteny irina, amin'ity tranga ity amin'ny Espaniola.
Ampiasao ny rakitra amin'ny fiteny izay entin'ny lohahevitray
Handeha any amin'ny lahatahiry fiteny amin'ny lohahevitray izahay ary hisafidy ny fisie rakitra fiteny mahazatra hanokatra azy amin'ny Poedit. Amin'ny ankapobeny, ity rakitra ity dia antsoina hoe "default.po" na amin'ny fanarahana ny anaran'ny fiteny miaraka amin'ny endrika efa noresahintsika teo aloha (en_GB.po ohatra).
Vantany vao misokatra ity rakitra ity dia handeha isika Propiedades ao anaty menu katalaogy ary hampihatra ireo toe-javatra izay heverinay fa mety, na dia tsy voatery hentitra aza izany, mora izany.
Izahay dia hitahiry ny katalaoginay manome azy endrika endrika izay efa hitantsika teo aloha tao amin'ny fampirimam-pitenin'ilay foto-kevitray ary avy eo dia hiasa izahay handika ireo teny izay heverinay fa mety. Mazava ho azy fa rehefa vita isika dia hitahiry azy indray mba havaozina ny vaovao.
Miasa amin'ny fisie POT
Hosokafanay ny rindranay ary avy amin'ny menio Archive hifidy ny safidy isika Katalaogy vaovao avy amin'ny fisie POT.
Avy amin'ny menio katalaogy y Propiedades hanova ny fampahalalana mifandraika amin'izany izahay.
Hotehirizinay ny rakitra apetrakay aorian'ny fanoratana anarana fiteny_COUNTRY ary hanomboka handika izahay ary avy eo hitahiry sy hanavao ny vaovao indray.
Rehefa manao ny fandikanao ianao dia tokony ho tadidinao fa ny soatoavina PHP dia tsy tokony holavina amin'ny fandikanay satria mety hisy lesoka tsy ilaina. Aza adino ihany koa ny endrika fampidirana anarana satria raha tsy miova endrika ny soso-kevitry ny anaran'ny rakitrao dia tsy mandeha ny fandikan-teny.
Ary ny plugins?
Mitovy ny fomba fiasa, na dia miova lojika aza ny anarana. Raha te hitahiry ireo katalaoginay Po dia ilaina ny manonona ny fisie eto amin'ireto rafitra manaraka ireto: Domain an'ny plugin izay adika + + Script (-) + fiteny + TANINDRAZANA.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » lohahevitra » Adikao amin'ny fomba tsotra ny lohahevitra sy plugins amin'ny WordPress
NASA dia te hamporisika anao hanao fizahan-tany amin'ny habakabaka amin'ireto afisy telo ireto